7 Best Tuneup Alternatives na-Worth a Gbalịa
Anyị na-na n'ụzọ zuru ezu nakweere dijitalụ afọ mgbe ọ na-abịa music, na anyị PC, mbadamba, smart-igwe na dijitalụ media Player bụ Elezie jupụtara dijitalụ ọdịyo egwu. TuneUp bụ usoro ihe omume nke na-aga site na gị dum dijitalụ music collection na-akpaghị aka fixes mislabelled songs, na-agbakwụnye efu cover nkà na ewepu duplicated tracks. Amagbu - ma e wezụga na TuneUp bụghị free, ugbu a retailing na $ 40. N'ebe a, anyị ga-enye gị 7 dị ọnụ ala karịa TuneUp uzo ozo ka tụnyere.
TidyMyMusic n'ụzọ ziri ezi na-akpaghị aka okụt na-agbakwụnye na-ese aha, song aha, album nkà, genre Ama, lyrics na ndị ọzọ, na-enyere gị na-gị collection zuru ezu ma hazie. Ihe bụ ihe ọzọ, nke a software bụ n'ezie mfe ma kensinammuo, ọbụna a novice nwere ike iji ya na-enweghị nsogbu ọ bụla.
MusicBrainz Picard bụ oké obere ịba uru na-akwado kasị ọdịyo faịlụ formats na-arụ ọrụ na Windows, Mac na Linux ka e dere na multi-ikpo okwu asụsụ eke. Nke a ngwa-akpaghị aka ụdị gị music collection na-eme ka n'aka onye ọ bụla na faịlụ a na n'ụzọ ziri ezi tagged. E nwekwara ọtụtụ mmezi plugins ị nwere ike ibudata na-eme ka MusicBrainz Picard ọbụna ihe bara uru.
EasyTAG bụ ihe ọzọ na-emeghe-isi iyi mmekọ na i nwere ike iji ele, dezie ma dee mkpado gaa na ọtụtụ ụdị nke faịlụ, gụnyere MP3, MP4, OGG na FLAC faịlụ. Ọ na ejikọ ma ndị Freedb.org na Gnudb.org sava iji jide n'aka na track mkpado ọmụma bụ ezi, na ike ọbụna ịsụgharị n'ime asụsụ ndị ọzọ karịa English.
TagScanner bụ ihe ngwa na ọtụtụ ọrụ na i nwere ike iji maka n'ịhazi na ijikwa music collection. Ọ ga-akpaghị aka jikọọ online ọdụ data dị ka Freedb.org, Amazon na Discogs ibudata cover nkà, na ị nwere ike igbanye listi ọkpụkpọ nke ị nwere ike wee dezie na mbupụ ka HTML ma ọ bụ Excel. Nwere ya wuru na-ọkpụkpọ kwa.
5. Tag & Gbanwé aha
Tag & Gbanwé aha na-ekwu na-abụ ihe kasị ọtụtụ dijitalụ ọdịyo faịlụ geo ngwa dị, na nkwado maka MP3, WMV, M4A, OGG na FLAC faịlụ na ọtụtụ, ọtụtụ ndị ọzọ. Usoro ihe omume ga na-akpaghị aka idozi zuru ezu faịlụ mkpado, ibu utu aha na cover nkà, ma mata na n'ịwa album ọmụma. I nwekwara ike ịsụgharị n'ime asaa dị iche iche asụsụ.
Jaikoz bụ a geo ngwa na dị ukwuu n'ihi na uka-nkpado music faịlụ. Ọ na-eji now mkpisiaka kenha na metadata ịlebanye anya na track ọmụma si MusicBrainz, Discogs na Acoustid track ọmụma ọdụ data. Ọ ga-akpaghị aka anya elu na-ekenye album artwork na ichu nta si duplicated tracks.
CopyTrans TuneTastic bụ usoro ihe omume gị ma ọ bụrụ na i jiri iTunes iji hazie na-enwe gị music Ọbá akwụkwọ, dị ka ọ na-enye gị a ukwuu karịa mgbanwe na nhọrọ karịa iji iTunes naanị ya. Ọ ga-amata albums na-efu efu egwu, nwere oyiri tracks ma ọ bụ na-efu efu artwork - niile mere na-akpaghị aka na click nke a bọtịnụ.
Olee otú iji tọghata WMV ka MKV
Olee otú iji tọghata MTS ka mpg / MPEG
> Resource> tọghata> 7 Best TuneUp Alternatives